ဒါလေးကတော့ ကျွန်တော့ သိထားတဲ့ Keyboard command key လေးတွေပါ
သူငယ်ချင်းများ အလိုရှိလျှင် အသုံးပြုလို့ရအောင် တင်ပြပေးထားပါတယ်...
Ctrl while dragging an item (Copy of the selected item)
Ctrl+Right Arrow (Move the insertion point to the beginning of the previous word)
Ctrl+Down Arrow (Move the insertion point to the beginning of the next (Move the insertion point to the beginning of the previous paragraph)
Ctrl+Up Arrow (Move the insertion point to the beginning of the previous (Move the insertion point to the beginning of the previous paragraph)
Alt+F4 (Close the active item, or quit of the active window)
Alt+Tab (Switch between the open item)
Alt+Esc (Cycle through item in the order that they had been opened)
F4 key Display the Address bar list in My Computer or Window Explorer)
F10 key (Active the menu bar in the active program)
Ctrl+Tab (Move forward the tabs)
Tab (Move forward through the tabs)
Windows Logo+M (Display or hide the Start menu)
Windows Logo+E (Open My Computers)
Left Alt+Left Shift+Print Screen (Switch High Contract either on or off)
Shift five items (Switch the Sticky Keys either on or off)
num Lock for five items (Switch the Toggle keys either on or off)
Num Lock+Asterisk sign(*) Display all of the subfolder that are under the selected folder)
Num Lock+Plus sign (*) Display the contents of the selected folder)
Num Lock+Minus sign(*) (Collapse the selected folder)
Right Arrow (Display the current selection if it is collapsed,or select the first
Adobe Acrobat Reader လျိှု့ဝှက်ချက်
Software ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ
ဆက်တင်တွေမပျောက်စေမယ့် Deep Freeze ဆော့ ဖ်ဝဲ
ကိုယ့် ရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဆက်တင်တွေကို တစ်စုံတစ်ယောက် က စရင်းနောက်ရင်း ပြင်သွားတဲ့ အခါမျိုး ၊ တခြားဆော့ဖ်ဝဲတွေကို install လုပ်သွားတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ စက်ကို ထားခဲတဲ့ အခြေအနေတိုင်း ပြန်ပြီးရှိစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Deep Freeze ဆိုတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလေးက ကူညီပေးနိုင်ပါမယ်...
Deep Freeze ဆိုတာ ကွန်ပျူတာထဲမှာ တခြားသူတွေ ဘယ်လိုဘဲ ၀င်ရောက်ပြင်ဆင်လိုက်ပေမယ့် restart ချလိုက်လို့ စက်ပြန်တက်လာတဲ့အခါမူလရှိတဲ့ ၀င်းဒိုးရဲ့ အခြေအနေတိုင်း ကိုယ့်ရဲ့ စက်တင်တွေကို မပျောက်မပျက်ရှိနေအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတမျိုးပါ Deep Freeze မှာ Frozen နဲ့ Thawed ဆိုပြီး အဆင့် နှစ်ဆင့် ရှိပါတယ်။ Frozen ကိုရွေးထားရင် စက်ကို restart ပြန်လုပ်လိုက်တဲ့အခါ ပြင်ဆင်ထားခဲ့ သမျှတွေအားလုံး Deep Freeze ကဖျက်လိုက်ပြီး မူလအခြေအနေကိုပြန်ရောက် သွားစေပါတယ်Thawed ကိုရွေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်စ်ိတ်ကြိုက် ဆက်တင်တွေကို ပြင်ဆင်နိုင် install လုပ်နိုင်ပါတယ်...
ဒါပေမယ့် စက်ထဲမှာရှိတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ တွေကို update လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ Thawed အနေ ကို ရွေးထားဖို့ လိုပါတယ်။ DF6Std.exe ဖိုင်ကို ကလစ် နှစ်ချက်လောက် ခေါက်လိုက်ရင် installation dialog ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်...
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Drive ကို Freeze လုပ်နိုင်ပေမယ့် Drive အားလုံးကို လုပ်ထားရင်ပိုကောင်းပါတယ်....
Deep Freeze ကို install လုပ်နေစဉ်တွင် antivirus ဆော့ဖ်ဝဲ နဲ့ အခြား program တွေကို ပိတ်ထားဖို့ လိုပါတယ် ထုံးစံအတိုင်း ပေါ်လာတဲ့ အဆင့် တိုင်း install လုပ်ပါ..စက်ပြန်တက်လာတဲ့ အခါမှာ Deep Freeze program ထဲ ၀င်နိုင်ဖို့ password တောင်းတဲ့ screen တစ်ခုပေါ်လာပါမယ် ဒါပေမယ့် အဲဒီ screen ဟာ 10 seconds ပေါ်ပြီးပြန်ပျောက်သွားမှာပါ..10 seconds အတွင်း password ရိုက်မထည့်ခဲရင်လည်း နောက်ပြန်ပြီး password ထည့်လို့ရပါတယ်...
Deep Freeze program ကို ကိုယ့် ရဲ့ စက်ကနေ ပြန်ပြီး ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ Thawed ကိုပြန်ရွေးထားရပါမယ်..
Deep Freeze program ကို လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲနိုင် ဖို့ နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိပါသည်..SHIFT ကီးကို ဖိထားပြီး Deep Freeze icon လေးကို ကလစ် နှစ်ချက်ခေါ်က်လိုက်ပါ...
ဒါမှမဟုတ် ကီးဘုတ်က CTRL+SHIFT+ATL နဲ့ F6 ကို တွဲနှိပ်လိုက်ရင် password တောင်းတဲ့ dialog box ပေါ်လာမယ်..ကိုယ့်ရဲ့ password ကိုရိုက်ထဲ့ ပါ..
Password သတ်မှတ်မထားခဲ့ရင် ဘာမှမရိုက်ဘဲ ok ကို နှိပ်လိုက်ပါ..Boot Control, Password, Clone ဆိုတဲ့ tabs သုံးခုနဲ့ Deep Freeze dialog box ပေါ်လာမယ်...
Boot Control tab ကတော့ Deep Freeze ကို အသုံးပြု ဖို့ ဖြစ်ပြီး password tab ကတော့ Deep Freeze program ထဲ ကို သူများတွေ မ၀င်နိုင် မပြောင်းနိုင်ဖို့ အတွက်ပါ....Clone tab ကတော့ registry setting file ကို ကော်ပီပွားနိုင်ဖို့ အတွက်ပါ...
Deep Freeze program အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင် start menu bar ရဲ့ နာရီဘေးမှာ Frozen icon လေးပေါ်နေမှာပါ..program ကို အလုပ်မလုပ်အောင် ရပ်ထားတယ်..Thawed ကိုရွေးထားတယ်ဆိုရင်တော့ Frozen icon ပေါ်မှာ အနီရောင် ကြက်ခြေခတ် တစ်ခုပေါ်နေမယ်...
4MB နီးပါးသာ ရှိပါတယ်..Deep Freeze ဆော့ဖ်ဝဲ ကို အင်တာနက်ဆိုင်တွေ ၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်းတွေ အပြင် IT စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေတော့ သိပြီး ၊ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ အခု ကျွန်တော် ပြန်တင်ပေးလိုက်တာ ကလဲ မသိသေးသူများအတွက်ပါဗျာ..ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ရဲ့ စက်တင်တွေကို စိတ်ချနိုင်ဖို့ အတွက်ဆိုရင် Deep Freeze ဆော့ဖ်ဝဲ က တစ်ဖက်တစ်လှမ်းကနေ ကူညီပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်....
DownLoad Link ကတော.
G talk ကို run box ကနေ အလွယ်ခေါ်ကြရအောင်
ဂျီတော့ ကို program ကနေမဖွင့်ပဲ ခပ်ဖိန့်ဖိန့်လေး Run box ကနေ
ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်...G talk shortcut ကို desktop ပေါ်ရောက်အောင်အရင်ပို့။။
ပြီးရင် rename လုပ်ပါ။ gt လို့ နာမည်ပေးလိုက်။ပြီးရင် အဲဒီ shortcut ကို cut လုပ်။
ဒါကတော ကျွန်တော် Myanmar Family ကနေ ဖတ်ထားတာလေးပါ ..
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေ ဘလော့ ထဲကို လာရောက်လည်ပတ်ရင်း
ပထမဆုံး ..RJ 45 ခေါင်းနဲ့ male ခေါင်းတွပါတဲ့ နက်ဝပ် cable တွေ နဲ့ switch မှာ ချိတ်ဆက်ထားဘို့ လိုပါတယ်...ပထမဆုံး စက်မှာ ..IP ထည့်ပါမယ်.. ခုပြောပြတဲ့အတိုင်း ထည့်ကြည့်ပါ...my network place > properties> TCP/IP ကို select လုပ် properties ကိုနှိပ်ပါ ..use following IP ဆိုတာမှာ IP address မှာ 15.11.80.1 ပြီးရင် tab ခုန်လိုက်ပါ ..subnetmark ကိုသူ့အတိုင်းရှိပါစေ..default gateway မှာလဲ...15.11.80.1 လို့ရိုက်ထည့်ပါ...အားလုံးကို ok လုပ်ပြီးထွက်..General Tab ကို ပြန်ရောက်ရင်..show icon in notification ဆိုတာကို အမှန်ချစ် လုပ်ပေးခဲ့ပါ..( tray မှာ ကွန်ပျူတာပုံလေးပေါ်လာအောင်ပေါ့) ဒါဆို ပထမ ဆာဗာအထိုင်စက် ပြီးပါပြီ...
တစ်လုံးက တစ်လုံးကို ခေါ်ချင်ရင် .. run box မှာ ..\_\_ 15.11.80.2\_ .enter ခေါက်လိုက်ရင် .. IP no2စက်ကို ခေါ်လို့ ရပါပြီ...နဲနဲလေးစောင့်ပြီးမကြာခင်မှာတက်လာမှာပါ ...
File Share နည်း
computer-A မှ Folder တစ်ခုကို share မည်ဆိုပါဆို
(၁) ၄င်းဖိုဒါကို right click နိုပ် Sharing and security ကို click (properties box ကျလာမည်)
(၂) Share this folder ကို ရွေးပါ
Permission ကို click
ကျလာသည် box ၏ အပေါ်တွင် everyone ရှိရမည် အောက်တွင် Change နှင့် read နှစ်စလုံးတွင် အမှန်ခြစ်ပေးပြီး ok ..... ok ဖြင့်ထွက်ခြင်းဖြင့် folder တစ်ခု share ခြင်းပြီးဆုံးပါပြီ
computer-B သည် Computer A မှ Share ထားသော folder ကို အလိုရှိပါက computer B ၏ run box တွင် \_\_computer A ၏ IP အမှတ်ရိုက်ထည်ြ့ပီး enter ခေါက်ပါက share ထားသော folder များအား ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
Printer Share နည်း
Computer A သည် printer တစ်လုံးအား တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားမည် ဆိုပါက
(၁) ၎င်း computer A တွင် ချိတ်ဆက်ထားသော printer များ share ထား/မထား အရင်စစ်ပါ။ (စစ်နည်းမှာ - Start > Settings > Pinters and Faxes ကို click ပြီးရင် မိမိ ချိတ်ဆက်ထားသော Printer icon တွင် လက်ပုံလေးရှိ/မရှိစစ်ပါ )Share ထားလျှင် computer A အနေဖြင့် ဘာမှ ဆောင်ရွက်စရာမလိုပါ။
လက်ဝါးပေါ်တွင် Printer icon လေးရှိရင် အမှတ်စဉ်(၂)အား ဆောင်ရွက်ရန်မလိုပါ။
(၂) - Control panel မှ Network wizard setup ကို click
- welcome wizard ကျလာမည် Next ဖြင့်ဆက်သွားပါ။
- ထပ်မံ၍ Next ဖြင့်ဆက်သွားပါ။
- အလယ်တစ်ခုကို ရွေး၍ Next ဖြင့်သွားပါ။(သင့် Network အား မူတည်၍ ရွေးရပါသည် အများစုမှာ အလယ် Network ကိုအသုံးများပါသည်)
- သင့်၏ computer name ဖြည့်ပါ Next ဖြင့်သွားပါ။
- သင့်၏ Network Group ဖြည့်ပါ Next ဖြင့်သွားပါ။
- Turn on file and printer sharing ကို ရွေး၍ Next ဖြင့်သွားပါ။
- Network Setting ဆောင်ရွက်မှုများ ပြီးစီးရန်အတွက် Next ဖြင့်ဆက်သွားပါ။
- setup ဆောင်ရွက်ခြင်းအား ခဏစောင့်ပါ
- အောက်ဆုံးက Just finish ..... ကို ရွေး၍ Next ဖြင့်ဆက်သွားပါ။
ဒါဆိုရင် Network Setup လုပ်ခြင်းပြီဆုံးသွားပါပြီ
ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် Computer A မှ Printer Share ပေးခြင်း ပြီးဆုံးပါသည်။
(၃) computer B သည် computer A နှင့်ချိတ်ထားသော printer မှ print ထုတ်လိုလျှင်
(က) Computer B ၏ run box တွင် \_\_computer A ၏ IP အမှတ် ရိုက်ထည်ြ့ပီး enter ခေါက်ပါ။
(ခ) Compter A မှ Share ထားသမျှ folder များကျလာမည် ၎င်းတို့ အတွင်းမှ printers and faxes ကို နှစ်ချက် click မိမိ print ထုတ်လိုသည့် printer တွင် right click ပြီးရင် connect တွင်ထပ်မံ click ပါက message box တစ်ခုကျလာမည့် yes ကို click ပါ။
ဒါဆိုရင် computer B ၏ start > settings > Pinters and Faxes အတွင်းတွင် computer A မှ printer အား အလိုလျှောက် ဆက်သွယ်ပြီးသာ ဖြစ်နေပါပြီ
သူမနှင့်စတင်ဆုံခဲ့စဉ် ကသူမ၏ မျက်နှာလေးသည် အလွန်လှသည်ဟုထင်ပါသည်။ သူမကြောင့် အိပ်ပျက်ပေါင်းလည်း များနေပါပြီ။ သူမ၏ နှလုံးသားသည် အလွန်တရာမှ နားလည်ရခက်သည်။ သို့သော် သူမကိုကျွန်တော်အလွန်ချစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တောသူ အကြောင်းလေး တွေကို သတိရလို တင်ပြ ထားတာပါ....